Global Voices teny Malagasy · 26 Septambra 2007
26 Septambra 2007
Tantara tamin'ny 26 Septambra 2007
Sina : Toeram-pitrandrahana Saribao Ankalamanjana
Lahatsoratra Malaza26 Septambra 2007
Ny Bilaogin'i Tempoly Tigra, dia namoaka fanadihadihana mikasika ny toeram-pitrandrahana saribao an-kalamanjana ao Shanbei. Ireo lavaka nateraky fitrandrahana dia nanova tanteraka ny endrik'ilay toerana. Ny tatitra dia amin'ny teny sinoa, saingy mirakitra sary maro samihafa mety hahaliana anao. Oiwan Lam
Lahatsoratra voalohany!26 Septambra 2007
Mibilaogy amin'ny teny vaovao (Patwa)
Hatramin’ny nanombohan’ny global online conversation no efa niadian-kevitra izay mety ho vokatsoa sy vokadratsy azo avy amin’ny fivoaran’ny haitaom-pampitam-baovao misy ankehitriny manoloana ny karazam-pitenenana rehetra misy. Amin’ny lafiny tsara, ahafahana mifandray sy mifanakalo hevitra hampiroboroboana sy hiarovana ny teny manokana ananan’ny vondrom-bahoakam-paritra ny aterineto. Ny mety haharatsy azy kosa indray...